आज शुक्रबार, शुक्रबारको दिनमा कुवेर`को पुजा आजा गर्नाले धन ब`र्षा हुने धार्मिक वि`श्वास – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Religious/आज शुक्रबार, शुक्रबारको दिनमा कुवेर`को पुजा आजा गर्नाले धन ब`र्षा हुने धार्मिक वि`श्वास
आज शुक्रबार, शुक्रबारको दिनमा कुवेर`को पुजा आजा गर्नाले धन ब`र्षा हुने धार्मिक वि`श्वास
देवता मध्येका सबैभन्दा धनी देवताको रुपमा कुबेर`लाई लिइन्छ । कुबेरको पूजा तथा उपसना गरेमा धन लाभ हुने धार्मिक विश्वास रहेको छ । तपाई धन आर्जन गर्न चाहनुहुन्छ भने भगवान कुबेरलाई खुसी पार्नु जरु`री रहन्छ । कुबेरको पूजा गर्नका लागि सवैभन्दा उत्तम बारका रुपमा शुक्र`बार मानिन्छ ।
तामाको एक प्लेटबाट कुबेर यन्त्र बनेको हुन्छ । त्यो नै कुबेर यन्त्र हो । जीव`नमा सुखी, सम्पन्न र ऐश्व`र्या प्राप्त गर्नको लागि कुबेर ७२ अंकलाई शुभ मानिन्छ । यस्तो यन्त्रलाई आफ्नो घर, अफिस तथा पसलहरुमा राख्न सकिन्छ ।
कुबेर यन्त्र हरेक पटक आफ्नो आँखाले देख्ने गरी राख्नुपर्छ । यसको मुख उत्तर वा पूर्वी दि`शामा फर्काएर राख्ने गर्नुपर्छ । हरेक बिहान पुजा गर्दा सुग`न्धित धुप बाल्नुपर्ने हुन्छ । जसले गर्दा घरमा सका`रात्मक उर्जा प्रदान गर्छ र नकारात्मक उर्जा हटेर जान्छ ।
कुबेर यन्त्रको पूजा गर्दा भगवान कुबेरको मन्त्र जप गर्नुपर्छ । ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः॥ यो मन्त्र हरेक बिहान २१ या १०८ पट`क जप गर्नुहोस् ।
शुक्ल पक्ष`को कुनैपनि शुक्रबार रात्रिमा कुबेरको पूजा शुभारम्भ गर्नुपर्नेछ । भोलिपल्ट बिहान काममा जानु भन्दा अगाडि कुबेरको आशिक लिएर घर बाट निस्कि`एमा तपाईलाई दिन सुखमय बित्नेछ भने धन प्राप्ति हुने योग बन्ने विश्वास गरिन्छ ।
आज शुक्रबार, बिहानै के-को पूजा गर्ने ?
6 lakhs gift at the Mahagadhimai fair in Bara
मंगलबार हनुमानको पूजा-पाठ गर्नाले हुन्छ कार्यसिद्धि !!
नपढ्ने लाइ ठुलो दशा लाग्नेअबस्य पढेर नाग देवताको दर्शन गरौ !!